Stay at home မှာ စိတ်ကျန်းမာအောင် | yathar Magazine
ဒီလိုကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီး ဖြစ်နေတဲ့အချန်မှာ သင့်အနေနဲ့ စိတ်ကျန်းမာနေဖို့က အဓိကကျပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ အပြင်တွေလည်းမထွက်ရ ရုံးတွေလည်း မတက်ရ ခရီးတွေထွက်ဖို့ဆို ပိုဝေး၊ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လည်း အရင်ကလို မတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ရော ကိုယ်ရော ကျန်းမာအောင် နေဖို့က စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးခက်ခဲနေတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်ရောကိုယ်ရောကျန်းမာအောင်နေဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုအခြေအနေက သင်တို့အိမ်က အိမ်မွေးခွေးလေးတွေနဲ့ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်လောက် လဲနေရသလို ခံစားရမှာ အသေအချာပါပဲ။ အရာရာတိုင်းက စိတ်ဖိစီးစရာတွေလည်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သင်ဝါသနာပါတဲ့အရာတွေကိုတောင် ဒီအချိန်မှာ မလုပ်ချင်တော့သလို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်အိပ်ရာကထတာနဲ့ ဒီနေ့ဘယ်လိုပျော်စရာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားပြီးတော့ သင့်မိသားစုတွေနဲ့ မျှဝေပါ။ အတူတူလုပ်ဆောင်ပါ။ ပြီး သင့်သူငယ်ချင်းမိတ်တွေတွေကို မျှဝေပါ။ ဒီနေ့တော့ ငါဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးကို social media ကပဲဖြစ်ဖြစ် မျှဝေပါ။ ဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့ ကိုယ့်လို စိတ်ဖိစီးနေတဲ့ လူတွေကို နည်းလမ်းကောင်းတွေ မျှဝေပေးပါ။ ဒီအချိန်ဟာ မိသားစုနဲ့အချိန်ပိုကုန်ဆုံးနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးပဲလို့ အကောင်းဘက်က တွေးပါ။
၂. တစ်နေ့တာ အချိန်ဇယားချထားပါ။
ညဘက်နောက်ကျတဲ့အထိနေပြီး မနက် ၉ နာရီ zoom meeting မတိုင်ခင်အမီထရတာက ပျော်စရာကောင်းရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကသင့်ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ ပျော်စရာမကောင်းပါဘူး။ အချိန်မှန်စား အချိန်မှန်အိပ်မှ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒီလိုအချိန်နဲ့ အိပ်တဲ့စားတဲ့ အကျင့်က သင့်စိတ်ကျန်းမာနေအောင်ကိုပါ အထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို အချိန်အနည်းငယ်လောက်လည်း လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပေးတာက သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ရော စိတ်အတွက်ရော ကောင်းမွန်တဲ့အရာပါပဲ။
၃.သင့်ရဲ့ စားသောက်မှုပုံစံကို ပြန်ဆန်းစစ်ပါ။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲ အများဆုံးချက်စားနေရတာပါ။ ဒီတစ်ချက်က ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အပြင်စာတွေ သိပ်မစားဖြစ်တဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါ။ ကိုယ်တိုင်ချက်စားနေရတဲ့အချိန်မှာ တတ်နိုင်သလောက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာလေးတွေ စားပေးပါ။ မိသားစုနဲ့အတူတူ ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ရတာကလည်း အကောင်းဆုံး အချိန်ကုန်ဆုံးရတာပါပဲ။ တစ်ပတ်တစ်ခါ အသစ်အဆန်းလေးတွေ ချက်ပြုတ်စားပါ။ အရင်က ဆိုင်မှာဝယ်စားခဲ့ရတဲ့ အစားအစာတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်က သင့်စိတ်ကို ပျော်ရွှင်စေမှာ အမှန်ပါပဲ။
အခုလိုအချိန်က အရင်ကမလုပ်ခဲ့ရတဲ့ အရာတစ်ခုကို စမ်းလုပ်ကြည့်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အသစ်အဆန်းတစ်ခုခုကို လေ့လာတာက ဒီအချိန်မှာ အသင့်လျော်ဆုံးပါပဲ။ ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုကို လေ့လာတာပဲဖြစ်ဖြစ် စာဖတ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် target တစ်ခုထားပြီး လုပ်ပါ။ ဥပမာ တစ်ပတ်ကို စာအုပ်တစ်အုပ် အပြီးဖတ်မယ်ဆိုတာမျိုး target ထားပါ။ သင်နှစ်သက်တဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခုကို လေ့လာတာမျိုးကလည်း သင့်အတွက် အကျိုးလည်း ဖြစ်စေသလို စိတ်ကိုလည်း အတန်အသင့်လျော့ပါးစေမှာပါ။
၅. သင်ချစ်ရတဲ့လူတွေကို ဂရုစိုက်ပေးပါ
ဒီလိုအချိန်မှာ လူတိုင်းက ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်အနားက မိသားစုတင်မကပဲ ရပ်ဝေးမှာရှိတဲ့ ဆွေမျိူးတွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဖုန်းပြောပါ။ ဒီလိုကာလမှာ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို့ကို နွေးနွေးထွေးထွေးပြောပြီး အားပေးပါ။ သူတို့ကလည်း သင့်ကို နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို့အကြောင်းတွေ ပြန်ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒါက သင့်အတွက်ရော သူတို့တွေအတွက်ရော နွေးထွေးတဲ့ စိတ်ခွန်အားကို ရစေမှာပါ။
ဒီတစ်ခုကို ပြောရတာတော့ ပျော်စရာမကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဆိုးဆုံးအခြေအနေအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ကြိုပြင်ဆင်ထားတာက တစ်နည်းတစ်ဖုံ သင့်စိတ်ပူပန်မှုကို လျော့ပါးစေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေသာ တကယ်ဖြစ်လာရင် သင့်အနေနဲ့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်သလို စိတ်ဓာတ်လည်း အများကြီး ကျသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုးဆုံး အခြေအနေကို ကြိုတွေးထားတဲ့အတွက် ဒီအခြေအနေက အဆိုးဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သင်နားလည်သွားမှာပါ။
၇.သတင်းအချက်အလက် ရယူမှုကို နည်းနည်းလောက် ကန့်သတ်လိုက်ပါ။
အခုလိုအချိန်မှာ covid 19 နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာနဲ့ သိနိုင်နေပါပြီ။ ဒါကလည်း ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုသတင်းတွေကို အချိန်ပြည့်ကြီး သိနေရတာက သင့်စိတ်ကို သက်သက်သာသာနဲ့ နေလို့ရစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ညအိပ်ခါနီးဆို ဒီလို သတင်း website တွေကို မကြည့်မိအောင်နေတာက ညအချိန်မှာ ကောင်းကောင်းအိပ်စက် အနားယူနိုင်မှာပါ။
ဒါဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာပြီးတော့ စိတ်ရောကိုယ်ရော ကျန်းမာအောင်နေပြီး ဒီကာလကြီးကို ကျော်ဖြတ်လိုက်ကြရအောင်ပါ။